Xaafadaha Seattle: Beacon Hill – Taariikh Kooban - HistoryLink.org
Xaafadaha Seattle: Beacon Hill – Taariikh Kooban
Beacon Hill waxay dusha ka eegtaa suuqa hoose ee Seattle dhinaca koonfur-bari waxana lagu gartaa sarta ka kooban 16ka dabaq ee Xarunta Caafimaadka Baasifik taasoo ka muuqata dhinaceeda waqooyi. Taagu wuxuu u fidaakoonfur-bari kana soo fidaa First Hill oo u dhaxaysa Duwamish River iyo Rainier Valley wuxuu sare u kacaa 350 fiit. Sida ay u muuqato Beacon Hill inay u dhawdahay suuqa hoose ee Seattle. Inkasta oo ay xaafada Beacon Hill ku dhowdahay suuqa hoose ee Seattle, hadana jugraafigu wuxuu xukumay inay xaafadaasi noqoto mid ka duwan suuqa hoose ee Seattle. Taaga waxa laga sameeyay deegana kala firiqsan, horraantii 1850dii, laakiin wuxuu sii ahaaday mid aan la dhisin tobanaan sano. Ninka ku jiray ciidamadii Midowga, isla markaana ahaa nin dhulka dhisa, ee la yidhaa. M. Harwood Young (1846 – 1913) ayaa buurta ku magacaabay Beacon Hill isaga oo ugu magic daraya xaafada taariikhiga ah ee ku taal Boostan ee la yidhaa Beacon Hill. Waxaanu ka dhisay tareenka korantada ku socda oo ku xidhaya xaafaddaa suuqa hoose. Tiirooyinka sakadaha Jackson iyo Dearborn ayuu ka jaray taaga si ay u fududaato ka imaanshaha suuqa hoose ee Rainier Valley, oo u baahanaysa biriish marka la tagayo Beacon Hill ee ku yaala 12th Avenue S. Ceelasha nidaamka biyaha Webiga Cedar ee magaalada waxa laga dhisay dusha taaga (halkaasoo ceel yar hore looga qabtay biyaha Lake Washington), dhulka ku xigaana wuxuu noqday Garoonka Xeegada Jeffeson Park. Cusbitaalka Ciidamada Badda Maraykanka (markii dambe Xarunta Caafimaadka Baasifik) waxa la dhisay 1930dii. Kadib Dagaalkii II ee Adduunka, cusbitaal wayn oo rug-cadaayada ciidanka ah ayaa laga dhisay Jefferson Park figta buurta yar. Dariiqa wayn ee magaalooyinka waawayn isku xidha ayaa loo jaray jiirada galbeed ee Beacon Hill 1960dii.